Tuesday September 22, 2020 - 07:14:50 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo 24-kii saac ee lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanno hoos yimaad degmada Dhuusamareeb gobolka Galguduud.
Sawir hore ciidamo katirsan Al Shabaab oo ku sugan Galguduud
Dagaallada oo soo bilaawday habeen hore ayaa soo gaaray shalay gelinkii dambe waxayna udhaxeeyeen dagaalyahannada Al Shabaab iyo ciidamada shisheeyaha AMISOM oo ay wehliyaan maleeshiyaad katirsan maamulka 'Galmudug'.
Sida wararku sheegayaan dagaal culus oo shalay ka dhacay inta udhaxaysa degmada Dhuusamareeb iyo deegaanka Bulacle ayaa dhaliyay khasaara xooggan oo gaaray maleeshiyaadka Galmudug.
Dagaalka oo qeyb ay ka ahaayeen ciidamada AMISOM ayaa soo gaaray xalay maqribkii, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan 8 askari oo katirsan Galmudug lagu dilay dagaalka halka 7 kale ay dhaawacyo soo gaareen.
Iska hor'imaadyo isla shalay gelinkii hore ka dhacay halka loo yaqaan Miirdugulle ayaa sababay dhimashada 3 askari iyo dhaawaca 8 kale, isku geyn ciidamada Galmudug shalay laga dilay waxay gaarayaan 11 askari.
illaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ciidamada Jabuuti kasoo gaaray dagaalladii shalay ka dhacay bartamaha dalka Soomaaliya.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ah ay dib ugu gurteen garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb waxaana dhammaan deegaannadii lagu dagaallamay maamulaya dagaalyahannada Jihaadiga Al Shabaab.